व्यक्तिगत सुरक्षा उत्पादहरू | PE / Latex / Nitrile / PVC दस्तानेहरूको लागि मात्र अर्को सोर्सिंग
अग्रणी उत्पाद निर्यातक
हामी एक स्टप सेवा प्रदान गर्दछौं, सयौं ग्राहकले हामीलाई उनीहरूलाई उच्च गुणवत्ताका उत्पादनहरू प्रदान गर्न विश्वास गर्दछन्
आज खरीद गर्नुहोस्
जन निर्माण उपलब्ध!
व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उत्पादनहरू
Unidus (HK) निगमले सस्तो मूल्यमा उच्च गुणवत्ताको सुरक्षा उत्पादनहरू प्रदान गर्दछ। सुरक्षा बजारलाई सामूहिक बजारमा किफायती गुणवत्ता बिना सस्तो बनाउनु सधैं हाम्रो लक्ष्यहरू मध्ये एक हो। हाम्रा उत्पादनहरू ग्राहकहरूको लागि सजिलैसँग उपलब्ध हुन्छन् उनीहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा उनीहरू सबैभन्दा कठिन कामका वातावरण हुन्।
अधिक विस्तार गर्नुहोस्
सुरक्षा सुधार गर्नुहोस्
चीनमा प्रमुख सुरक्षा उत्पाद निर्माताको रूपमा, हामी तपाईंको कार्यस्थलको सुरक्षा सुधार गर्न व्यापक सुरक्षा र स्वास्थ्य समाधान प्रदान गर्दछौं। हजारौं व्यक्तिहरू हाम्रो उत्पादनहरूमा उनीहरूको कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउन भरोसा राख्छन् र यसले व्यापारको सही समझ बनाउँदछ।
हामी हाम्रा उत्पादनहरूमा प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू प्रस्ताव गरेर तपाईंको लागत कम राख्न मद्दत गर्दछौं। हामी उपयुक्त उत्पादनहरूको खरीदको लागि उपयुक्त उत्पादनहरू खरीद गर्न अतिरिक्त लागत खर्च नगरीकनै तपाइँको ग्राहकको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सही उत्पादनहरू प्रयोग गर्न उत्तम प्रदान गर्दछौं।
Acree चीन मा निर्माण उत्पादन संयंत्र र देश भर मा एक विस्तृत वितरण नेटवर्क छ। हामी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) र उपकरण भन्दा बढी 3000+ प्रकार को प्रस्ताव।
जब कार्यस्थलको वातावरणमा कामदारहरूको सुरक्षाको आश्वासन दिइन्छ, उत्पादकता र दक्षता बढ्ने संभावना बढी हुन्छ। तपाईका कामदारहरूले आत्मविश्वास महसुस गर्नेछन् र काममा ध्यान केन्द्रित गर्नु भन्दा उनीहरूको सुरक्षाको बारेमा चिन्तित हुनुको सट्टा काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्षम हुनेछन्।
व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) निर्माणमा १० बर्ष भन्दा बढीको अनुभव, कडा गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत निर्माण गर्दछ जुन आईएसओ 10 ००१: २०१ Standard मानकमा प्रमाणित छ। गुणवत्ता उत्पादनहरू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानकमा प्रमाणित छ र उत्पाद गुणवत्तामा लगातार सुधारको लागि एक मजबूत आर एंड डी टीम द्वारा समर्थित।
हामी २ inquiry घण्टा भित्र तपाईको सोधपुछको लागि प्रतिक्रिया दिनेछौं। अनुभवी सुरक्षा परामर्शदाताको टीम द्वारा समर्थित राम्रो तकनीकी समर्थन प्रदान गर्न र इन-हाउस डिजाइन टोलीले अनुकूलित उत्पादनहरूमा तपाईंलाई सहयोग गर्न।
धेरै राम्रो बाट प्राप्त गर्नुहोस्
हामी सुरक्षाको सर्तमा उत्तम समाधान प्रदान गर्दछौं उत्पादन र सेवाहरूको पूर्ण दायराको साथ। हामीलाई दुर्घटना रहित कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्न उत्तम लगानी प्राप्त गर्न सम्पर्क गर्नुहोस्।
सोमबार-शुक्रवार::: ०-8-१-00: H० घण्टा
(फोन १ 17::30० बजे सम्म)
शनिबार -:: ०-8-१-00: ००
प्रमुख कार्यालय: फ्लाट सी, / / ​​एफ, विनिंग हाउस, नम्बर NO-9, विING्ग लोक स्ट्रिट शँग वान, हONGक K
फोन: + 86 512 56986025
फ्याक्स: +86 512 58577588
हामीसँग उत्कृष्ट उत्तरहरू छन्
हामीलाई केहि सोध्नुहोस्
कति समय तपाईले PPE उत्पादनहरू बनाउनु भयो
१० बर्ष भन्दा बढिको विकास पछि पीई ग्लोभ्सको निर्माताबाट सुरु गर्दै, अब हामी 10० भन्दा बढी प्रकारका पीपीई उत्पादनहरू आपूर्ति गर्दछौं।
के तपाइँ OEM सानो अर्डर मात्रा स्वीकार गर्नुहुन्छ
हो, हामी ग्राहकको आवश्यकता अनुसार डिजाइन र निर्माण गर्न सक्दछौं। हामी OEM लाई थोरै परिमाणको साथ स्वीकार्छौं, हामी सँगै व्यापारको विकासको आशा गर्छौं।
के तपाई प्रत्येक ढुवानी अघि गुणस्तर निरीक्षण गर्नुहुन्छ?
हो, प्रत्येक अर्डरको लागि, हामी बिभिन्न उत्पादन प्रक्रियामा निरीक्षण गर्छौं, र शिपमेंट अघि गुणस्तरको निरीक्षण गर्न हामीसँग हाम्रो विशेष QA टीम हुनेछ।
सबै वितरित अर्डरहरूको लागि तपाईंको गुणवत्ता ग्यारेन्टी के हो?
हामी १२ घण्टा भित्र ग्राहकको उजूरी जवाफ दिनेछौं, र हामी सबै गुणस्तरीय मुद्दाहरूको लागि जिम्मेवार छौं।
T / T (बैंक स्थानान्तरण) मार्फत भुक्तानी स्वीकार गर्नुहोस्, एल / सी नजरमा (बल्क आदेशहरू) ..
तपाईंको डिलिभरी समय के हो?
सामान्यतया हामी order० दिन भित्र नयाँ अर्डर दिन्छौं, तर हामी छोटो समयमा पुश अर्डर पनि गर्छौं।
म कसरी बजेट उद्धरण पाउन सक्छु?
नोर्मेल हामी जानकारीमा अफर बेस दिन सक्दछौं जस्तै आयामी स्केच वा उत्पादन चरित्रहरू। तपाइँले तस्विरमा उद्धरण आधार पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, कृपया नोट गर्नुहोस् कि जब यो जस्तो कोटेशन दिइन्छ हामीसँग मूल्य निर्धारण समायोजन गर्ने अधिकार आरक्षित हुन्छ यदि अज्ञात जानकारी पछि प्रकट हुन्छ।
के हुन्छ यदि मैले उचित वेबसाइट मैले खोज्न सकिन भने म तपाईंको वेबसाइटबाट खोज्दै छु?
हामी पीपीई उत्पादनहरूको लागि तपाईंको पूर्ण स्रोत बन्न चाहन्छौं। हामी समाधानहरू प्रदान गर्न कार्य गर्दछौं जसले हाम्रा ग्राहकहरूलाई सफल हुन मद्दत गर्दछ। Acree तपाइँको सहयोगमा पीपीई उत्पादनहरू विकास गर्न मद्दत गर्न पनि सक्षम छ। र दुर्लभ मामिलाहरूमा कि हामी सबै भन्दा राम्रो स्रोत होईन, हामी तपाईंलाई मद्दत गर्दछौं सही दिशामा।